Ndezvipi zvinounganidza kupisa uye zvinoshanda sei | Green Renewables
Chii chinonzi kupisa maunganidzi uye anoshanda sei?
ChiGerman Portillo | | Kumba Economics
Vanhu vazhinji vane kudziya kwemagetsi mudzimba dzavo uye vanoona kupera kwemwedzi kuti mari yavo yemagetsi inowedzera sei. Iko kushandiswa kwemagetsi kwakabatana nerudzi urwu rwechiitiko kunoputika nekukurumidza munguva inotonhora mwaka. Magetsi senzira yekudziya inonyatsogadzikana uye inoshanda, asi inoonekwa seimwe yeanodhura pamusika. Nekudaro, kunzvenga aya matambudziko aripo kupisa kuunganidza.
Chii ichi nezve kupisa maunganidzi? Kana iwe uchida kuziva nzira yekuchengetedza zvakanyanya sezvinobvira pakupisa, pano isu tinotsanangura zvese zvine chekuita nemaunganidzira. Iwe unofanirwa kuramba uchiverenga 🙂
1 Chii chinonzi kupisa maunganidzi?
2 Magetsi kudziyisa masisitimu
3 Mhando dzekupisa dzinounganidza
4 Mhando huru
Chii chinonzi kupisa maunganidzi?
Izvo zvishandiso zvine basa rekushandura magetsi emagetsi kuita simba remhepo nemutengo wakaderera kwazvo. Ndokunge, kuburikidza nemagetsi tinogona kudziisa makamuri edu asi nemutengo wakaderera pane neyakajairwa kudziya. Izvo zvakagadzirirwa kushandisa simba remagetsi panguva yakaderedzwa mwero nguva. Mitengo yese inouya nepurogiramu apo magetsi akadhura. Izvi zvishandiso zvine basa rekushandura simba remagetsi panguva yakachipa kwazvo yezuva uye kuzviunganidza muchimiro chekupisa. Uku kupisa kunenge kuripo patinoida.
Izvi zvishandiso zvinounza mabhenefiti akakura ekushandisa, sezvo tichigona kushandisa kupisa kwavo pese patinenge tichida uye tichaderedza mutengo. Pamusoro peizvi, zvinodziya zvinopisa zvine zvimwe zvakanaka zvakadai se:
Iko hakuna kurasikirwa kwekupisa panguva yekushandisa. Izvi zvinoitika nekuti ivo vanongogadzirira kubhadharisa iro rakakwana simba rinodiwa. Sezvo simba risina kuchengetwa zvakanyanya, hapana kurasikirwa.
Inochengetedza simba rakawanda uye inopa kunyaradzwa kwakanyanya. Kuve nesimba pazvinenge zvichidiwa kuri nyore. Iyo ine mutoro wekuronga system pane yakaderedzwa rate maawa kuona kuchengetedza pakati pe50 ne60%.
Hapana post-yekumisikidza gadziriso inodiwa.
Iyo ine sarudzo yekubatanidzwa mune iri kure manejimendi system.
Dhizaini yacho compact, saka hazvisi zvakaoma kuiisa mukati mekushongedza kweimba. Uye zvakare, kubata kwayo uye kugadzirisa zviri nyore.
Magetsi kudziyisa masisitimu
Kune vanhu vazhinji vakaisa kudziyisa mumba. Vese vanhu vakasarudza kupisa, vanogona kunakidzwa nemidziyo yakaita se:
Oiri kana thermoelectric radiators. Icho chimwe chevaunganidzi vekare varipo. Vanoshanda nekupisa mafuta anopisa. Kana izvi zvikaitika, tembiricha inowedzera sezvo kupisa kwakabatwa mumafuta kuchisunungurwa.
Radiating pasi. Icho chiri pasi pevhu kudziisa ndiko kuiswa uko kwakabatana network yemapaipi kana tambo dzinoendesa mvura inopisa pasi peimba yeimba. Izvi zvinobatsira pasi kuburitsa kupisa uye kuwedzera tembiricha mumazuva anotonhora echando. Yakave imwe yazvino uno uye inoshanda masisitimu, kunyangwe mutengo wayo wekutanga wakakwira uye unoda mabasa.
Pombi yekupisa Iko kunakirwa kwerudzi urwu rwekuunganidza ndiko kuti hakupedze simba rakawanda. Iyo yekudzikira ndeyekuti inongopisa iro kamuri iko iko iko. Iko kupisa kunowanzopararira nekukurumidza zvakanyanya, saka hakuna kukosha kwakanyanya.
Radiant mahwendefa. Aya mafungu anopisa anowedzera kupisa kwemukamuri maakaisirwa nenzira yakafanana.
Zvinopisa kupisa. Sezvambotaurwa, iwo anopikisa emagetsi anochengeta kupisa kana mwero wemagetsi wakadzikira uye wozvichengeta.
Vanofambisa. Izvo zvishandiso zvine basa rekupinda mumhepo inotonhorera uye kudzinga iyo inopisa mweya yekutenda kune vamwe vanopikisa uye ma thermostats avanazvo.
Mhando dzekupisa dzinounganidza
Kune mhando mbiri dzekupisa dzinoungana idzo vatengi vanogona kuisa mudzimba dzavo:
Kunofambira mberi. Iyi modhi inokwanisa kuburitsa kupisa kwesimba zvakasikwa. Zvinokurudzirwa kuti nzvimbo dzinogarwa zvachose sezvo kwavo tembiricha tembiricha iri yenguva dzose.
Simba Vane feni inobatsira kutapurirana kwesimba. Kuzviparadzanisa kwayo kunoshanda kupfuura zvimire zvimire. Kudzora kuburitswa kwesimba kunovatendera ivo kuti vagadzirise zvirinani tembiricha yenzvimbo dzakasiyana dzeimba.
Kugadzirisa kushandisa kwehupfumi, izvo zvinowanzoitwa kusangana mhando mbiri dzevaunganidzira mumba. Dzakatsiga dzinoiswa munzvimbo hombe uye dzinesimba dzinoshandiswa mune epakati.
Paunenge uchisarudza iyo accumulator yakanakira zvikonzero zvehupfumi, zvinogona kutaurwa kuti iyo ine simba. Izvi zvinodaro nekuti inobvumidza zvirinani kudzora kwemutengo uye kugoverwa kwekupisa mumakamuri zvichienderana nezvinodiwa.
Iyo yekudziya sisitimu yemacololator ine shoma nzvimbo yekuchengetedza Vanokwanisa unganidza simba uye chengeta riripo nekuti pazvinodiwa. Inogona kugadziriswa kuti ishande mumaawa apo mwero wemagetsi wakadzikira.
Izvo zvakakosha kuti utaure kuti aya maunganidzira anofanirwa kuperekedzwa neakanakisa kuputira pamba. Kana tisina mahwindo anotibvumidza kudzora kupisa kana kutonhora kwatinopinza nekubuda mumakamuri kana machira akakwana, hazvibatsiri.
Kuiswa kwezvinhu izvi kuri nyore uye hakudi chero basa. Kugadziriswa kwayo kwakaderera. Inongoda kucheneswa kwegore rega uye shanduko yemabhatiri echronothermostats.
Sezvo zvisiri zvese zvakanakira mune chero mhando yemidziyo yemagetsi yatinoshandisa, mune ino nyaya tava kuzotaura nezvezvakaipira zvayinazvo. Iyo yakaunganidzwa kupisa mutoro inofanirwa kuitwa pachine nguva pamberi. Izvi zvinomanikidza vatengi kuronga zvavanoda. Kana isu tisingazive kana kuchatonhora kana kwete neimwe nguva, hatigone kuishandisa kana tichiida ipapo ipapo. Zvinogona kuitika kuti tine kushanya kusingatarisirwi uye hatigone kupa kudziya nekuda kwekusave nako kwayakaunganidzwa.
Usati wawana chiunganidziro unofanirwa kufunga zvimwe zvinhu zvakaita se:
Mutengo wepamusoro wechigadzirwa chimwe nechimwe. Uku ndiko kutanga kwekudyara, kunyangwe iyo ichibhadhara nekufamba kwenguva.
Kana mutengi aine mutero pamwe nekusarura kweawa, simba recharge rinofanira kuitwa husiku.
Iko kune kushoma kutonga pamusoro pekupisa kubuda.
Nekuongorora kweizvi zvinhu, ndinovimba unogona kusarudza yako yekupisa sisitimu zvakanaka 🙂
Yakazara nzira kuchinyorwa: Green Renewables » Simba rekuchengetedza » Kumba Economics » Chii chinonzi kupisa maunganidzi uye anoshanda sei?
Zvese zvaunoda kuti uzive nezve evaporative inotonhorera